Ekeroth oo xukunkii jidh dilka ahaa laga siidaayey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ekeroth oo xukunkii jidh dilka ahaa laga siidaayey
La daabacay fredag 1 december 2017 kl 11.20
Kent Ekeroth oo ah xilibaan xisbiga Sverigedemokraterna u metela baarlamaanka Sweden ayaa maanta maxkamadda rafcaanka ka siidaysay xukun hore maxkamaddi ugu riday.
Ekeroth ayaa markii hore lagu xukumay ganaax dhan 38 400 kr, ka dib markii maxkamada hoose ku heshay in uu gacan ka hadal iyo jidhdil kula kacay nin ay is af dhaafeen. Arrintan ayaa la sheegay in muuqaalka kamaradaha goobta ku xidhan iyo makhraatiyaddii goobta joogay cadeeyeen. Balse Ekeroth waxa uu markasta ku doodayey in uu isdifaacayey.
Rafcaanka maanta go´aanka laga gaadhay ayaa ah mid uu Ekeroth ku guulaystay. Maxkamadda rafcaanka waxa ay qabtaa in denbi oogaha aanu haynin cadeeyn ku filan oo beeninaysa dooda Ekeroth ee ah in uu gacan ka hadalka u sameeyey isdifaac awgeed.
Xisbiga Sverigedemokraterna oo hore u shaaciyey in aanu Ekeroth meteli doonin hadii denbi jidhdil ah lagu helo, ayaa hada sheegay in ay soo dhaweeynayaan xukunkan lagu siidaayey Ekeroth. Hayeeshee waxa xisbigan sheegay in ay doonayaan in uu Ekeroth hawlaha dhanka cadaaladda ah ee uu ka hayo baarlamaanka iskaga tago. Sidan waxa wakaalada waraka ee TT u sheegay Mattias Karlsson oo ah gudoomiyaha kooxda xilibaannada Sverigedemokraterna ee baarlamaanka.
Qareenka Ekeroth Johan Eriksson ayaa isna wakaaladda wararka ee TT u sheegay xukunkan yahay mid ku dayasho mudan marka ay timaado sida loo qiimaynayo cadeeynta.
Ekeroth ayaa maanta gelinkii danbe sheegay in uu kategi doono kaalitii uu ka hayey kooxda cadaaladda ee barlamaanka.
- Hadii uu Åkesson aad u jecel yahay in aanan fadhiyin booska aan kaga jiro kooxda cadaaladda waa aan dhiibi doonaa kursigaas ayuu u sheegay wargeeyska garabka midig ee lagu magacaabo Samhällsnytt.